Imigangatho yokuZala yaseSiberia
Abafuyi bokuqala baseSiberia Huskies babexhalabile ngakumbi kunakwifom, ngenxa yoko abantu baseSiberia bokuqala beza kumxube oxakayo weemilo kunye nobukhulu. Abanye babebhityile kwaye bomile, abanye bomelele kwaye bomelele. Ukuze ukwazi ukuzala okwenyani, abafuyi abazinikeleyo kweli lizwe baqala ukuphuhlisa umgangatho wokudibana. (Izilwanyana zala yinyani xa abazali abafanayo besoloko bevelisa abantwana abajongeka njengabo.)
I-American Kennel Club (AKC) yamkela i-Siberian Husky njengohlobo ngo-1930 kwaye yabeka uhlobo lwayo kwiqela elisebenzayo. Iqela elisebenzayo liqela lezinja ezahlukeneyo ezibandakanya iAkitas, iGreat Danes, iNewfoundlands, kunye neRottweilers. I-Husky yaseSiberia yi Uhlobo lweSpitz inja, igama elikhumbula ukuzala kwalo emantla (iSpitzbergen liqela leziqithi kuLwandlekazi lweArctic kumantla eNorway). I-Akitas, iSamoyed, iMalamute, kunye nePomeranian encinci zonke zizinja zohlobo lweSpitz.
I-AKC yokuqala ebhalisiweyo yase-Siberian Husky yayingu-bitch (igama elisetyenziselwa ukubhekisa ezinjeni zabafazi) egama lingu-Fairbanks Princess Chena, owazalwa nge-16 kaSeptemba 1927. Utata wakhe kwathiwa ngu-Bingo. I-Huskies yokuqala yaseSiberia ukuba yi-AKC Champions yayingu-Pola ngo-1931 kunye ne-Northern Lights Kobuk, ukusuka kwi-Northern Lights Kennel e-Fairbanks, e-Alaska, kunyaka olandelayo.
Imigangatho yokuzala yaseSiberia yapapashwa okokuqala ngo-1932; itshintshe kancinci ukusukela ngeloxesha. IHusky yinja eyakhelwe isantya kunye nonyamezelo. Ungomnye wezona zincinci zizinja eziSebenzayo kodwa enye yezona zikhawulezayo. I-Husky, iponti ngeponti, yomelele kunazo zonke izinja zesileli okanye uyilo.
Umdibaniso ogudileyo weSiberia wobabalo namandla amenza inkwenkwezi naphina apho aya khona. Ngo-2019, wabeka indawo ye-14 ekuthandeni phakathi kwazo zonke iintlobo ezingama-195 ze-AKC, esona sikhundla esihle. (Ukuphakama kakhulu kwinqanaba lokuthandwa kukumema ukuphindaphindeka okuyingozi, ngelixa iphantsi kakhulu inokubonisa ukuba incinci kakhulu.)
Izitshixo zeSiberia elungileyo ngumlinganiso, umlinganiso, idyasi kunye nobushushu. Umgangatho waseSiberia weHusky umele inja yokubonisa efanelekileyo, injongo apho abalimi bezabalazela khona. Akukho Siberia ngaphandle kweyakho egqibeleleyo, kodwa ukubona ukuba inja isondele kangakanani kumgangatho kuhlala kunomdla kwaye ngamanye amaxesha kuyahlekisa.
Sukuba nexhala ukuba eyakho iSiberia ayihambelani nomgangatho; uninzi lwezona ntobelo zilungileyo, umdyarho, kunye neenja ezihamba nazo ziya kuqhushumba kumsesane wokubonisa.
Jonga eli nani lilandelayo ngomzekeliso weempawu zangaphandle zeSkyky Husky kwaye ubhekise kuyo njengoko ufunda ngamalungu omzimba kaHusky ahlukeneyo kula macandelo alandelayo.
Iimpawu zangaphandle zeSiberia Husky.
Amadoda, ekubhekiswa kuwo njengezinja kwilizwe leenja, kufuneka eme phakathi kwe-21 kunye ne-23-1⁄2 intshi egxeni kunye nobunzima beepawundi ezingama-45 ukuya kuma-60. Iibitches ziphakathi kancinci zincinci- ii-intshi ezingama-20 ukuya kuma-22 egxalabeni naphakathi kwama-35 nama-50 eepawundi. Ubunzima kufuneka bulingane ngokobude.
Izilwanyana ezide ngaphezu komgangatho zinokuxolelwa kwindandatho yokubonisa njengezigqithisileyo; nangona kunjalo, ii-intshi ezongezelelweyo azichaphazeli umgangatho wesilwanyana konke konke. Ngaphakathi komgangatho, iijaji aziboneleli nakuphi na ukuthanda izinja nokuba kukweliphi icala lesiphelo; Inja enkulu inokwenzeka ukuba iphumelele njengencinci, kwaye ngokuchaseneyo.
Umntu olungileyo waseSiberia kufuneka abonise uxande endaweni ye iprofayile yomzimba wesikwere, intsingiselo yokuba ubude benja ukusuka kwindawo yegxalaba ukuya kwisiseko somsila bude kunokuphakama ukuya emagxeni. Iimbambo azifanelanga ukuba zicaba ngokupheleleyo okanye zigqithise. U-Olaf Swenson, umphandi we-arctic kunye no-Husky aficionado wase-Siberia, wayekholelwa ukuba iflank elungileyo ibonelela ngamandla ngexesha elide. Lo mbono ugcinwe kumgangatho wosuku lwangoku. U-Swenson ukwathe izinja ezinamandla amakhulu ane-vertebrae ephezulu kunezo zenja ephakathi, kunye nokudakumba okunzulu phakathi kwamaqhina. Le ngcebiso inkulu ukugcina engqondweni.
Inkqubo ye- ubushushu (okanye umva kunye nesinqe) seHusky kwinqanaba ukusuka iyabuna (emagxeni) ukuya croup (isinqe). Umzimba waseSiberia nawo umde kancinci kunomsila wakhe. I-croup ithambeka kude nomqolo kwi-engile.
/ r / iziyobisi
Isifuba kufuneka sibe nzulu, kuba iqulethe intliziyo nemiphunga, kodwa ingabanzi kakhulu. Igxalaba lisetelwe kwinqanaba le-45-degree emhlabeni; igxalaba elithe nkqo okanye elixegayo sisiphoso.
Imilenze yaseSiberia yeHusky kufuneka ithe tye kwaye ilingane, ibekwe ngokulinganayo, neengqiniba zikufutshane nomzimba.
Imilenze yangasemva kaHusky kufuneka ingqinelane kwaye ibekwe ngokuphakathi, ngamathanga aphezulu anomsipha. Iinzipho zombethe zangasemva kufuneka zisuswe, kuba aziloncedo kwaye zinokubanjwa ngokulula kwinto ethile ngexesha lenja eqhelekileyo yenja, yenzakalisa inja.
Intamo inobude obuphakathi kwaye kufuneka ifakwe kakuhle. Intamo elungileyo ibaluleke kakhulu kwihlabathi likaHusky, kuba izihlunu ezininzi ezilawula umphambili ziyadlula kuyo.
Intloko kufuneka ibe nobukhulu obuphakathi, irhangqwe kancinci ngaphezulu, kwaye ngokuthe ngcembe icofwe ukusuka kwelona likhulu ukuya kutsho emehlweni. I-muzzle mayibe nkqo; Inqaku le-muzzle akufuneki liboniswe okanye libonakalise isikwere. Inja kufuneka ibhengezwe yeka (indawo apho i-muzzle idibana nebunzi), kwaye intloko kufuneka ibonakalise ukucoceka okucocekileyo. Intloko enzima, enobunzima sisiphoso; ikwanjalo ne-muzzle ecekeceke kakhulu.
IiHuskies zaseSiberia kulindeleke ukuba zilume isikere, oko kuthetha ukuba amazinyo aphezulu alingana ngokusondeleyo kumazinyo asezantsi. A isikere siyaluma yeyona isebenzayo ekubambeni nasekuqwengweni kwexhoba. A ukuluma kwenqanaba, apho amazinyo adibana ngokulinganayo, phezulu nasezantsi, kuthathwa njengempazamo kolu luhlobo.
Abantu baseSiberia baziwa ngokuqaqadeka, intetho yabo egwenxa, ekhupha ubukrelekrele kunye nothando lobomi. Banxiba uncumo olungapheliyo. Iimpawu ezimnyama ezijikeleze amehlo, impumlo, kunye neendlebe luphawu olwahlukileyo lolu hlobo.
Amehlo aseSiberia anokuba ngawo nawuphi na umbala-omdaka, luhlaza okwesibhakabhaka, okanye inxalenye eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nenxalenye emdaka kwiliso elinye, ekubhekiswa kuyo umbala-weqela (okanye ezinamachokoza, okanye Umehlulelwano ). Amehlo anokuba luhlaza okanye amber. Imigangatho yokuzala yaseSiberia yamkela izinja ezinamehlo amabini (omnye wombala ngamnye). Umgangatho awukhethi umbala wamehlo ngaphezulu komnye, kwaye uninzi lwabafuyi abenzi njalo, nangona uninzi lwabanini lunepenchant yalawo mehlo aluhlaza okwesibhakabhaka.
Nokuba ungumbala onjani, amehlo kufuneka amile okwe-amangile, kwaye abekwe kwindawo engacacanga; Amehlo abekwe kufutshane kakhulu asisiphoso. Uninzi lweengcali ziyavuma ukuba amehlo amdaka aphethe ngaphezulu kohlaza okwesibhakabhaka okanye oluhlaza. Oku kuthetha ukuba abazali abanamehlo aluhlaza okanye oluhlaza baya kuvelisa amantshontsho anamehlo anombala ofanayo.
Iinjana ezizalwe zinamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka zihlala zinamehlo ansundu njengabantu abadala. Abo bazalwe benamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka, nangona kunjalo, baya kuwugcina loo mbala ngokuba ngabantu abadala.
Ngaphandle kweeHuskies ezimhlophe nezobhedu, iifeleni zamehlo kufuneka zibe mnyama. (Iiringi zamehlo ezimhlophe nezobhedu iiHuskies zinokuhambelana neebhatyi zazo.)
Abantu babekholelwa ukuba izinja zi-colorblind. Akuyonyani, nangona amehlo abo emini engenakufana nawomntu. Babona okuluhlaza, okumthubi, kunye o-orenji ngombala otyheli, naluhlaza okwesibhakabhaka kunye no-violet buluhlaza. Luhlaza-buluhlaza kujongeka kungwevu kubo. Umbono wabo wobusuku, nangona kunjalo, ungaphezulu kowomntu.
Iindlebe zikaHusky ezime nkqo, eziphakathi ngokomgangatho zingunxantathu ezineengcebiso ezijikelezwe kancinane, zibekwe zangaphezulu kwaye azikho kude kakhulu. Zifanele zigqunywe kakuhle ngoboya, ngaphakathi nangaphandle. Iindlebe ezinoboya azintle kuphela, kodwa zibaluleke kakhulu kwinja yeArctic. (Iindlebe ezivulekileyo ezivulekileyo zaseSiberia zinceda ukuba zihlale zomile kwaye zicocekile, into edityanisiweyo kumnini waseSiberia.) Ngendlela, iindlebe ezime nkqo zilunge ngakumbi ukuva kunezo zefloppy. Ii-Huskies zinokuva amaza aphakamileyo nangaphantsi kunabantu; banokuva uluhlu lwamaxesha angama-40 ukuya kuma-60,000 Hz. Uluhlu lomntu luyancipha kakhulu: phakathi kwe-20 kunye ne-20,000 Hz.
Iinyawo ezilungileyo zibaluleke kakhulu kwinja ekhuselweyo. Iinyawo zaseSiberia kufuneka zinikezwe kakuhle ngoboya phakathi kweepads kunye neenzwane ngezizathu ezicacileyo. Iipads ngokwazo kufuneka zibengqindilili kwaye ziqiniswe kakuhle, eyona nto iyimfuneko kwinja yesileyi. Iinyawo zimile okweqanda kwaye azikho mncinci kakhulu okanye zinkulu kakhulu, kwaye akufuneki ziphume okanye ziphume.
uphononongo lolawulo lokuzalwa
IHusky ine umsila wempungutye, oko kuthetha ukuba igcwele kwaye inamahlahla kuyo yonke indlela. Iinwele mazibe nobude obuphakathi. Ngelixa uphumlileyo, uhamba, kwaye utsala isileyi, umntu waseSiberia uhlala ephethe umsila wakhe uphantsi, kodwa ngamaxesha onwabe kakhulu, umsila uhlala ujikeleza umqolo kaHusky. Ixesha lobuchwephesha kule nqwelo umsila werhengqa. Umsila werhengqa akufuneki ugobe nokuba ngasekhohlo okanye ngasekunene kodwa uhlale ujijekile (ungabambeki nkqo) ngaphaya kweziko lomqolo wenja.
Zombini i-curl kunye nobushushu bomsila ziqhelekile kwizinja ze-arctic ngokubanzi. Zombini zisebenza ngenjongo, zivumela isilwanyana ukuba silale endaweni egobileyo kunye neempumlo ezibuthathaka ezingcwatywe ngoboya obufudumeleyo bomsila, obukhuselweyo kubusuku obukrakra beArctic. Le yeyona idumileyo Ukuntywila eSiberia .
Ii-Huskies zinento ebizwa ngokuba yi idyasi ephindwe kabini, Ingubo yangaphantsi eshinyeneyo eshinyeneyo, ene-outercoat ye iinwele zokugada. I-under- kunye ne-outercoats zinemibala eyahlukileyo. Iinwele zokugada kufuneka zilale ngokuthe tye kwaye zibe mpuluswa. Isilky okanye i-outercoat erhabaxa ithathwa njengempazamo. Iinwele ziphakathi ngobude obuphakathi, kwaye akufuneki zisithe iphrofayili kaHusky. (Zonke ezinye iintlobo zasemantla zineenwele ezinde.) Ukuguqula (bonisa) izinja ngamanye amaxesha zineenwele ezinde kunezinja ezisebenzayo, kodwa ibhatyi ecekeceke ayilunganga kwaphela.
IiHuskies zinokuba ngowawo nawuphi na umbala-okanye nayiphi na indibaniselwano yemibala-ukusuka emhlophe ecocekileyo ukuya kumnyama omsulwa. Akukho khetho lunikwa nawuphi na umbala. Umahluko omnye phakathi komgangatho we-AKC nowaseBritane yileya merle (amabala amnyama embala) ngumbala ongavunyelwanga kubantu baseSiberia base-U.S. Siberian Huskies bahlala benemilinganiselo yeebhatyi, zihlala zinomtsalane, zingabonwa kwezinye iintlobo.
Umbala sisihloko esinzima. Enye into, akukho luhlobo lunye loxanduva lokubangela ukuba inja ibe ngumbala othile. Izazinzulu zichonge ubuncinci imfuza elishumi yeepateni zombala weenja, kunye nohlobo lombala, ukuhanjiswa, kunye nokuqina; Imfuza ikwanoxanduva lwemaski yaseSiberia. Kwabantu baseSiberia, ibhatyi yangaphantsi kunye noboya obuphezulu beenwele zokugada zinokuba nemibala emibini eyahlukeneyo okanye imibala. Ukongeza, imibala ebonakalayo kwizinja ezincinci inokutshintsha ngokuhamba kwexesha. Iimaski ziyavela zize zinyamalale. Iidyasi zinokutshintsha ukusuka ebumnyameni ziye ekukhanyeni, okanye ngokungafaniyo. Abanye bade batshintshe ukusuka ebumnyameni ukuya kubomvu. Ndinomhlobo u-Husky otshintsha umthunzi kunye neshedi nganye!
Uninzi lweentlobo zeenja zinemibala ethile okanye iipateni ezinxulumene nazo ezibandakanyiweyo kwimigangatho yazo yokuzala. I-Samoyeds, umzekelo, ihlala imhlophe, kwaye iiLabradors zilubhelu, mnyama, okanye itshokholethi. Akunjalo kubantu baseSiberia.
U-Husky oneenwele ezizodwa umbala omnye ubizwa ngokuba ngu imonochrome inja. Oku kuyinyani nokuba ezinye zezi nwele zimhlophe kwaye ezinye zimthubi. Kwinja ye-monochrome, iinwele ezizodwa azikho ibhendi (egqunywe mhlophe okanye tyheli), nangona inja enye inokuba neenwele zemibala eyahlukeneyo. Izinja zeMonochrome zinokuba mhlophe, ubhedu, okanye mnyama. Eminye imibala, njengegrey, isable, kunye ne-agouti, ayisoze ibe zii-monochromes. Isichasi se-monochrome yingubo eboshiweyo.
IBhodi yabaLawuli beSiberian Husky Club yaseMelika ivuma le nkcazo yemibala ilandelayo: mnyama nomhlophe, ngwevu nomhlophe, bomvu nomhlophe, sable nomhlophe, agouti nomhlophe, kwaye mhlophe ngokuqinileyo. Ngesiqhelo, igama mhlophe ishiywe xa kuthethwa ngombala wenja, ngaphandle kokuba, kunjalo, isilwanyana simhlophe qwa.
Emnyama nemhlophe: Abantu abamnyama nabamhlophe baseSiberia beza kwezi shades zilandelayo:
Jet mnyama: Idyasi yokugada imnyama ngokuqinileyo, kwaye ingubo yangaphantsi imnyama, amalahle, okanye ngwevu emnyama. Oku kwaziwa njengengubo ye-monochrome. Ezi nwele azibotshwanga, nangona ngamanye amaxesha inwele emhlophe enye okanye ezimbini ziyavela. Uninzi lweenja ezimnyama jet nazo zinombala omnyama kwiipads zazo kunye nophahla lwemilomo yazo.
Mnyama: Izinwele ezimnyama zokugada zinokubotshwa kwaye ezinye zimhlophe zingavela kufutshane neengcambu. Ingubo yangaphantsi ngumbala okhanyayo kunaleyo yenja emnyama; Ngapha koko, ezinye iinwele ezinombala oshushu zinokuvela.
Nciphisa umnyama: Iinwele zokugada zinebhanti emhlophe, kodwa iingcebiso zimnyama. Ingubo yangaphantsi inesamente esimhlophe kwaye iinwele ezinde ngasemva nasentloko zimnyama. Uboya obufutshane obumhlophe bengubo yangaphantsi bunika amaqhekeza isamente yesilivere.
Ngwevu nomhlophe: Ngwevu kunye nabamhlophe baseSiberia beza kwezi shades zilandelayo:
Isilivere engwevu: Iinwele zokugada ziboshwe ngeetoni ezahlukeneyo ezimhlophe. Ingubo yangaphantsi imhlophe, inika inja into yesilvery, emnyama kancinci emqolo. Le toni yesilver ibizwa ngokuba yi mzantsi.
Ngwevu: Iinwele zokugada ziboshwe ngethowuni okanye iitoni zeethoni ezineengcebiso ezimnyama. Ingubo yangaphantsi inethoni ye-beige okanye etyheli, inika inja isamente emthubi / engwevu.
Ingcuka ingwevu: Iinwele zokugada ziboshwe ngebuff ecaleni kweengcambu kwaye zinamnyama. Ingubo yangaphantsi yikhrimu, inika inja ifudumele ebomvu / engwevu.
Olubomvu nomhlophe: Izinja ezibomvu nezimhlophe ngamanye amaxesha zibizwa ngokuba lubhedu. Kwizinja zobhedu, akukho nwele zimnyama zibonakalayo. Iinwele zokugada ziboshwe ngee-shades ezahlukileyo zemibala eqinileyo ngaphandle komnyama. AmaHuski abomvu namhlophe ahlala enendawo enemibala yesibindi (iirim zamehlo, iindlebe, iimpumlo, kunye nemilebe). Ukuba ababini baseSiberia baxubene, iinjana ziphantse zibhedu. I-Copper Siberians inokuba namehlo e-amber okanye aluhlaza okwesibhakabhaka, kodwa angaze abe mdaka.
Sable nomhlophe: Iinwele zoonogada ziboshwe ngombala obomvu kufutshane neengcambu kodwa zifakwe kumnyama. I-Sable kunye ne-Siberia emhlophe zihlala zinamanqaku amnyama kunye nokuncipha okumnyama eboyeni. Inja yonke inesamente ebomvu ebomvu. Lo mbala unqabile.
Agouti nomhlophe: Iinwele zokugada ziboshwe ngombala omnyama ezingcanjini kunye neengcebiso ezinamaqela etyheli okanye beige embindini weenwele. Ingubo yangaphantsi ingamalahle. Indawo yesihlalo senja ihlala ijongeke grizzled kuyo. Agouti kwezinye iilwimi ichazwa njenge umbala wasendle. Iklabhu yaseSiberia yeHusky iyaqhubeka iqaphela ukuba lo ngowona mbala ubonwa rhoqo kwiimpuku zasendle, kodwa andazi ukuba ngenene bekufuneka bethethile. (Ngokobuchwephesha, zichanekile, nangona kunjalo. I-agouti yitropical South American rodent, malunga nobukhulu bomvundla. Inenwele ezivalelweyo, okukhokelela kukukhanya okutshintshayo kokukhanya kunye namabhanti amnyama.) Ngesizathu esithile, umbala we-agouti uyabonakala rhoqo kwimigca yokubaleka kunakwamanye amaSiberia. I-Agoutis ihlala ineentshebe ezimnyama kakhulu kunye neenzwane ezimnyama.
Umhlophe oqinileyo: Iinwele zokugada zimhlophe qwa okanye ziboshwe nge-cream ecekeceke kwiingcambu, nangona iinwele ezimnyama ngamanye amaxesha zinokubakho. Ingubo yangaphantsi imhlophe ngokuqinileyo okanye isilivere, kwaye amanqaku anokuba mnyama okanye umbala wesibindi. Uninzi lwabathandi beSuserian Husky bakhetha ukuba izinja ezimhlophe zinamanqaku amnyama, nangona kungekho mthetho malunga noku. Umhlophe ngumbala ogqithileyo kubantu baseSiberia; ukuba ngaba abantu ababini abamhlophe baseSiberia bazalwa, zonke iinjana nazo zimhlophe. Abafuyi abaninzi bacinga, nangona kunjalo, ukuba owona mbala (mhlophe ngokuqinileyo ngamanqaku amnyama) uvela ngokuzala umzali omnyama (ophethe ufu omhlophe) kumhlophe ngokuqinileyo. Kule meko, iipesenti ezingama-50 zeenjana zimhlophe qwa.
Impumlo yaseSiberia kufuneka ibe mnyama ngwevu, mnyama, okanye izinja ezimnyama; isibindi sezinja zobhedu okanye ezibomvu; kunye nenyama enombala wezinja ezimhlophe. Imigca epinki impumlo yekhephu iyavumeleka. Impumlo yekhephu inokuba lixesha elithile, inyamalale ehlotyeni. (Ngokwenyani, impumlo iphela ayipheli, ngumbala nje opinki.) Impumlo yekhephu ngokufanelekileyo ebizwa ngokuba yinto eqhelekileyo phakathi kwamaHusky eSiberia.
Ukujoja yeyona nto ibalulekileyo ezinjeni kwaye yeyona nto ibaluleke kakhulu kunowomntu. Izinja neengcuka azinako nje ukujoja izinto abantu abangasoze bazibone, kodwa banokuxela nokuba indala kangakanani ivumba kuba iimpawu zalo naliphi na ivumba litshintsha ngokufihlakeleyo ngokuhamba kwexesha, nto leyo ebaluleke kakhulu. Umzekelo, ivumba lakutsha nje lesilwanyana esixhwithekileyo liya kuvusa ithemba kwibhokhwe elambileyo ye-canine, kodwa ukuba ivumba lelo lixesha elidala, lisenokungahoywa. Lo mvundla umkile kudala.
Nangona ungeke uxele ngokujonga nje, impumlo yenja nganye yahlukile, njengophawu lweminwe lomntu. Ngapha koko, bekuprintwa iimpumlo ukuchaza inja enye kwenye. Ngokungafaniyo ne-microchipping, ngekhe utshintshe okanye ususe ipateni yempumlo.
I-Siberia kufuneka ihambe ngokuhamba ngokutyibilikayo nangomzamo, ibonakalisa ukufikelela kakuhle ngaphambili kunye nokuqhuba okuhle ngasemva. Kuya kufuneka abe lula kwaye akhawuleze ngeenyawo zakhe. Intloko iqhutyelwa phambili kancinci xa inja ibaleka. Indlela emfutshane, yokuhambahamba kuthathwa njengempazamo. Ukunkqangaza okanye ukuwela nako kohlwaywa.
ungathatha ibuprofen kunye nebenadryl
I-Siberia yaphuhliswa njengenja yeqela. Ngenxa yoko, ubushushu bakhe kufuneka buphaphile kwaye bunobuhlobo; Ubugwenxa bohlwaywa ngokuqatha. Abantu baseSiberia bamkela wonke umntu, kubandakanya nabantu ongabaziyo. I-Husky yase-Siberian eyakhiwe kakuhle ngokuqinisekileyo ayinakwenza inja yokulinda elungileyo. Elona gama lilungileyo lokuchaza ubushushu bukaHusky luyavuya .
I-clonidine 0.1 mg ephezulu
c ++ ikopi yefayile
Ungawurhoxisa njani umyalelo kwi-etsy
ukuncipha kokukhutshwa ngaphambi kokubeleka
bhalisela iakhawunti entsha ye-gmail
Ukudibanisa ipad mini kwi-tv